Erayga Ciise Masiixi wuxuu ka Awood badnaa Dabeecadda - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Surah Adh-Dhariyat (Surah 51 – Dabayllo Dabeyl leh) ayaa sharraxaya sida Nebi Muuse CSW loo diray Fircoon.
(Nabi) Muusana calaamo lagu waana qaatu ahaa markaan u dirray Fircoon isagoo wata xujo cad
Suuradda Adh-Dhariyat 51:38
Nebi Muuse wuxuu muujiyay ama tusay awoodiisa awood mucjiso ah xagga dabeecadda, oo ay ku jirto kala go’ida Badda Cas. Mar alla markii qof sheegto inuu yahay nin nebi ah (sidii uu Muuse u haystay) wuxuu la kulmay mucaarad waana inuu caddeeyaa inuu mudan yahay aaminid ahaan. Fiiro u yeelo qaabka Surah Ash-Shu’aara (Suuradda 26 – Gabayaaga) ay sharraxayaan wareegtadan diidmada ah iyo caddeynta in nebiyadu soo maray.
Waxay Beeniyeen Qoomkii (Nabi) Nuux Rasuulladii.Markuu ku Yiidhi Walaalkood Nuux Miyeydaan Dhawrsanayn.Anigu waxaan idiin ahay Rasuul Aamin ah.
Surah Ash-Shu’aara 26: 105-107
Waxay Beeniyeen Caad Rasuulladii.Markuu ku Yidhi Walaalkood Huud Miyeydaan Dhawrsanayn.Anigu waxaan idiin ahay Rasuul Aamin ah.Ee ka Dhawrsada Eebe Ina Adeeca.
Surah Ash-Shu’aara 26: 123-126
Waxay Beenisay Thamuud suulladii.Markuu ku Yidhi Walaalkood (Nabi) Saalax Miyaydaan Dhawrsanayan.Waxaan idiin ahay Rasuul Aamin ah.ee ka Dhawrsadda Eebe ina Adeeca.
Surah Ash-Shu’aara 26: 141-144
Waxay Beeniyeen Qoomkii (Nabi) Luudh Rasuuladii.Markuu ku Yidhi Walaalkood Luudh Miyeydaan Dhawrsanayn.Waxaan idiin ahay Rasuul Aaminee.ee ka Dhawrsada Eebe ina Adeeca.
Suuradda Ash-Shu’aara 26: 160-163
Waxay Beeniyeen Kayntii Ehelkeedii Rasuulladii.Markuu ku Yidhi Nabi Shucayb Miyeydaan DhawrsanaynWaxaan idiin ahay Rasuul Aaminee.ee ka Dhawrsada Eebe ina Adeeca.
Surah Ash-Shu’aara 26: 176-179
Nebiyadani dhammaantood waxay la kulmeen diidmo waxayna ahayd culeyskooda inay cadeeyaan inay yihiin nebiyo is aaminaan. Tani waxay sidoo kale run u ahayd Nebi Isa al Masih.
Nebi Isa al Masih (NNKH) wuxuu awood u leeyahay barida iyo bogsiinta ‘erey’. Wuxuu sidoo kale awood u lahaa dabeecadda. Injil wuxuu diiwaan geliyaa sida uu uga gudbey harada isaga iyo xertiisii ​​si ay u buuxiyaan ‘cabsi iyo amakaag’. Waxaana qoran sidan:
Lukoos 8: 22-25
Eraygii Ciise xitaa wuxuu siiya Amar dabeesha iyo hirarka badda! La yaab ma lahan xertii isaga la joogtay baqidda aay u baqeen. Awoodda noocaas ah ayaa ka yaabiyay iyo cidda uu yahay. Munaasabad kale markii uu la jiray kumanaan kun oo qof ayuu muujiyay awood la mid ah. Markan ma uusan amrin dabaysha iyo hirarka – laakiin cunno. Sida ku qoran:
Waxaas dabadeed Ciise wuxuu u kacay dhinaca kale oo badda Galili oo ahayd baddii Tiberiyas. 2 Dad badanna way raaceen, waayo, waxay arkeen calaamooyinkii uu ku sameeyey kuwii bukay. 3 Kolkaasaa Ciise buurta u baxay, halkaasna ayuu xertiisii la fadhiistay. 4 Markaasna waxaa dhowayd Iiddii Kormaridda ee ahayd iiddii Yuhuudda.
5 Haddaba Ciise intuu indhihiisii kor u qaaday, ayuu wuxuu arkay dad badan oo soo socda, wuxuuna Filibos ku yidhi, Xaggee baynu kibis ka soo iibinnaa inay kuwanu cunaan? 6 Wuxuu waxaas ugu yidhi inuu jirrabo isaga, waayo, isaga qudhiisu waa ogaa wuxuu samayn lahaa.
8 Markaasaa xertiisii midkood oo Andaros la odhan jiray oo Simoon Butros walaalkiis ahaa wuxuu ku yidhi, 9 Halkan waxaa jooga wiil qaba shan kibsood oo shaciir ah iyo laba kalluun, laakiin waxaasi maxay u tarayaan dad sidan u badan?
10 Markaasaa Ciise yidhi, Dadka fadhiisiya. Meeshaasina waxay lahayd doog badan. Haddaba nimankii waa fadhiisteen, tiradooduna qiyaastii waxay ahayd shan kun. 11 Haddaba Ciise kibistuu qaaday, oo goortuu mahadnaqay ayuu u qaybiyey kuwii fadhiyey, sidaas oo kalena kalluunkii intay doonayeen.
12 Markay wada dhergeen, wuxuu xertiisii ku yidhi, Ururiya jajabkii hadhay, waxba yaanay ka hallaabin. 13 Sidaa aawadeed ayay ururiyeen, oo laba iyo toban dambiilood ayay ka buuxiyeen jajabkii ka hadhay kuwii shantii kibsood oo shaciirka ahayd cunay.
14 Haddaba dadkii markay arkeen calaamadii uu sameeyey, waxay yidhaahdeen, Runtii, kanu waa nebigii dunida iman lahaa. 15 Ciise wuxuu gartay inay imanayaan inay qabtaan oo boqor ka dhigaan, sidaas daraaddeed ayuu mar kale keligiis buurta u baxay.
Markii dadkii ay arkeen in Ciise uu badin karo cuntada sidii shan xabbadood oo kibis ahayd iyo labadii kalluun ay u quuteen 5000 oo nin welibana ay soo reebeen wax badan ayaa waxay ogaayeen inuu yahay nin gaar ah. Waxay la yaabi jireen inuu isagu yahay Nabigii uu muuse Towreed uu ku saadaaliyay waqti hore inuu imaan doono. Runtii Waxaan ognahay in Ciise Masiix inuu yahay Nabigaan maxaa yeelay Tawreed wuxuu ku qoran sidan:-
Calaamadda nebigani wuxuu ahaa in Eebbe geliyo ‘ereyadiisa afka’ ee Nabigaan. Waa maxay kalimooyinka Eebbe ka soocay dadka? Jawaabta waa lagu celcelinayaa aayadda soo socota, iyadoo ka bilaabaneysa Surah An-Nahl (Surah 16 – Shinida malabka):
haddaan doono arrinna waa inaan uun ku dhahno ahow oy
Amarka Eebena markuu wax inuu abuuro doono waa inuu ku yidhaahdo uun ahaw oo uu ahaado
Ciise wuxuu bogsiiyay cudurada oo wuxuu ka saaray jinniyada sharka leh ‘eray’. Hadda waxaan aragnaa inuu ku hadlayo Erey iyo dabaysha iyo hirarku ay adeecaan. Markaas buu hadlay oo kibistii waa batay. Calaamadahaas oo ku jira Tawreedka iyo Qur’aanka ayaa sharraxaya sababta markii uu Isa al Masih hadlay, ay noqotay – maxaa yeelay wuxuu lahaa amar. Wuxuu ahaa Masiixa.
Qalbigaa ayaa wax fahma
Laakiin xertii laftoodu si adag bay u fahmeen tan. Ma aysan fahmin muhiimadda ay leedahay in la badsado kibista. Waxaan taas u ognahay sababta oo ah Injil-ka ayaa diiwaangelinaya in dhabtii quudiyeen 5000 oo qof: sida ku qoran :-
45 Kolkiiba wuxuu xertiisii ku amray inay doonnida fuulaan oo ay hortiis tagaan dhanka kale oo Beytsayda intuu dadkii badnaa dirayo. 46 Goortuu kala diray, ayuu buurta tegey inuu ku tukado. 47 Goortii makhribkii la gaadhay, doonnidii waxay joogtay badda dhexdeeda, isaguna keligiis ayuu dhulka joogay. 48 Wuxuu arkay iyagoo wadidda ku dhibtoonaya, waayo, dabaysha ayaa ka gees ahayd. Wakhtigii gaadhka afraad oo habeenka ayuu u yimid isagoo badda ku dul socda, wuuna iska dhaafi lahaa. 49 Laakiin goortay arkeen isagoo badda ku dul socda, waxay moodeen inuu muuqasho yahay, markaasay qayliyeen. 50 Waayo, way wada arkeen, wayna nexeen. Markiiba wuu la hadlay oo ku yidhi, Kalsoonaada, waa aniga ee ha baqina. 51 Markaasuu doonnidii iyaga ugu tegey, dabayshuna waa joogsatay. Aad iyo aad bay u nexeen oo ula yaabeen. 52 Waayo, iyaga kibistii waxba kama ay garanin, maxaa yeelay, qalbigoodu waa engegnaa 53 Oo markay gudbeen waxay yimaadeen dalka Gennesared, oo doonnidiina xeebtay ku xidheen. 54 Goortay doonnida ka soo degeen, kolkiiba dadku way garteen isaga. 55 Oo waxay orod ku wareegeen dalka u dhow oo dhan oo bilaabeen inay kuwa buka sariiro ugu soo qaadaan meeshii ay ku maqleen inuu joogo. 56 Meel alla meeshuu galayba, tuulooyinka ama magaalooyinka ama beeraha, waxay suuqyada dhigeen kuwa buka, oo ay ka baryeen inay faraqa maradiisa oo keliya taabtaan, oo kuwii taabtay oo dhammuna way bogsadeen.
Markoos 6: 45-56
Mar labaad, nebi Isa al Masih wuxuu ku hadlay Erayga awood oo waxay noqotay “noqo”. Laakiin xertii ma ‘fahmin’. Sababta ay u fahmi waayeen maahan inay ahaayeen kuwa aan caqli lahayn; maxaa yeelay ma ay joogin halkaas; ma’aha sababtoo inaay ahaayeen xertii xun; mana uu ahayn maxaa yeelay waxay ahaayeen kuwoo aan rumeysan. Maya, waxay leedahay ‘qalbigooda waa sii qallafsanaaday’. Nebi Yeremyaah (NNKH) wuxuu sii sheegay in Axdiga cusub uu imaan doono – oo sharciga lagu qori doono qalbiyadeenna. Ilaa uu Axdigii u beddelay qof qalbigoodu adag yahay – xataa quluubta kuwa raacsan Nabiga! Oo weliba qalbiyadeenna adag ayaa naga celisa fahamka runta ruuxiga ah ee nebiyadu muujiyeen.
Tani waa sababta shaqada diyaarinta Nebi Yaxye (NNKH) ay muhiim u tahay. Wuxuu dadka ugu yeeray inay toobad keenaan iyagoo qiran dembigooda halkii ay isku dayeen inay qarin lahaayeen. Haddii xerta Ciise Masiix ay lahaan jireen qalbi adag oo u baahan toobadkeenidda iyo qirashada dembiga, intee in leeg ayaan aniga iyo aniga nahay! Laga yaabee inaad ila mid noqon doontid adoo duceeya qalbigaaga adoo baryaya Allah (Wuxuu ogyahay xitaa fikradaheena si aan si fudud uga tukan karno fakirka) qirashada uu bixiyay Daauud:
Oo aad daahir ahaatid markaad wax xukunto. Ilaahow, igu dhex abuur qalbi nadiif ah,
Waan kuu baryayaa tan oo waxaan kuugu dhiira gelinayaa inaad sidaas sameyso sidoo kale in Fariimaha Nabiyada loo fahmo qalbi jilicsan oo saafi ah inta aan ku guda jirno Injil.
Tags:be and it isisa al masih in injilisa miraclesmiracles of Isamiracles of isa al masihThe Injil unveiled Tagsauthority of Isa